Ao amin'ny boky tantara an-tsary Asterix sy ny lehibe amin'ny 2017 hazakazaka fantatra amin'ny anarana hoe iray amin'ireo mpifaninana ho an'ny Coronavirus.
Photo: Avy ny rakikira Asterix sy ny hazakazaka lehibe.
Ny iray amin'ireo mpifaninana ao amin'ny boky tantara an-tsary Asterix sy ny hazakazaka lehibe izay navoaka tamin'ny taona 2017 any Soeda niantso Coronavirus fotsiny, ary na dia "The Great Coronavirus," ary ny mpanampy hoe Bacillus.
Sary an'i Asterix sy ny hazakazaka lehibe.
"Ny Coronavirus lehibe"
Izany dia mazava ho azy fa mivazivazy, fa efa tsy ho mahafinaritra mivantana amin'izao fotoana izao, nomena ny zava-mitranga eto amin'izao tontolo izao ny tamin'ilay fotoana ny Coronavirus Covid-19.
Avy amin'ny boky tantara an-tsary Asterix sy ny hazakazaka lehibe.
Tsy namaky ny serielabumet rehetra, afa-tsy niditra tao nifandray sary sasany avy amin'ny habaka.
Fa ny marina Tsy mino fa ny faminaniana na ny faminaniana ny Coronavirus Covid-19 izay namely izao tontolo izao tamin'ny 2020.
Covid-19 an'ny fianakaviana ny Coronavirus, ka Coronavirus Mazava ho azy, dia fantatra tamin'ny 2017, raha ny andian-dahatsoratra rakikira Mpamorona namazivazy momba izany.
Fa nomena ny zava-misy ankehitriny, dia tsy hafahafa ny milaza ny kely indrindra Taitra rehefa fihaonana ny andian-dahatsoratra iray.
Ny rakotra fanaovam-panavotana an'i Asterix sy ny hazakazaka lehibe.
Jesosy nitondra ny aretintsika
Ny toetrany in Asterix sy ny lehibe fifaninanana antsoina hoe "The Great Coronavirus", ary mety hihevitra fa ny Coronavirus Covid-19 no lehibe, izay amin 'ny fitsipika dia afaka hanakatona izao tontolo izao iray manontolo.
Izany ihany no firenena Afrikana izay toa ho voatsimbina amin'ny izany. fa ny Coronavirus tsy be! Misy kely otrik'aretina - tsy hita maso otrik'aretina - toy ny taloha ela be i Jesosy no resy teo amin'ny hazo fijalian'i Kalvary!
I Jesosy, rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana, Izy no nitondra, afa-tsy noho ny fahotantsika, na dia ny aretina! Teo amin'ny hazo fijaliana i Jesosy nandresy ny devoly sy ny demoniany rehetra.
Jesosy efa nitsangana tamin'ny maty sy ny fiainana amin'izao fotoana izao. Ary tsy misy famonjena sy ny fahasitranana amin'ny anarany!
Efa nandray an'i Jesosy? Voavonjy ve ianao? Izany dia ora ho anao ny mahazo izany ankehitriny, raha tsy ianao.
Raiso Jesosy ho Tompo amin'izao fotoana izao eo amin'ny fiainanao ary mino fa Andriamanitra efa nanangana Azy tamin'ny maty. Avy eo dia hovonjena sy hahazo famelan-keloka ny fahotanareo rehetra!
Vecka 31, fredag 6 augusti 2021 kl. 00:50